भव्य बन्यो रानीपोखरी -
मनास्लु पाेष्ट ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०६:३५ 200 पटक हेरिएको
काठमाडौँ, कात्तिक ४ गते । पुनर्निर्माण गरिएसँगै ऐतिहासिक सम्पदा मध्येको एक रानीपोखरीको सुन्दरताबारे चर्चा बढ्न थालेको छ । केही महिना अघिसम्म एउटा भग्नावशेष जस्तो देखिने रानीपोखरीको स्वरूप यतिबेला कायापलट भएको छ । कञ्चन रानीपोखरीमा दरबार हाइस्कुल, जमल क्षेत्रका उच्च भवनसँगै उत्तरपूर्वमा रहेको घण्टाघरको छवि निकै रमणीय देखिन्छ ।
यसवर्षको तिहारमा रानीपोखरी र बालगोपालेश्वरको मन्दिर नागरिकका लागि खुला गरिने भएको छ । बुधबार यसको औपचारिक उद्घाटन गरिएपछि तिहारमा आम नागरिकका लागि खुला गर्ने निर्णय गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
झण्डै एक सय कामदारको समूहले रानीपोखरीलाई थप चम्काउने काम मङ्गलबार साँझसम्म भ्याउनेछन् । गतवर्षको भदौ अघिसम्म भने भक्तपुरबाट आएका सम्पदा निर्माण गर्ने महिला सहितको टोलीले प्रारम्भिक चरणको काम सकेका थिए । पोखरीका डिलमा बनेका प्राचीन इँटामा रङ्गरोगन र टालटुल गर्न व्यस्त राम श्रेष्ठले चिल्ला, आकर्षक डिलसँगै पर्खालको काम गरिरहेको बताउनुभयो । पहिले आउँदा काम कताबाट सुरु गर्ने जस्तो लागेको थियो, अहिले देख्दा मनै फुरुङ्ग हुन्छ, उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।
रानीलाई खुसी पार्न वि. सं. १७२७ मा रानीपोखरी निर्माण भएको थियो ।